SAWIRO:- Rabshado ka dhashay doorasho ka dhacday degmo kamid ah Somaliland | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA SAWIRO:- Rabshado ka dhashay doorasho ka dhacday degmo kamid ah Somaliland
SAWIRO:- Rabshado ka dhashay doorasho ka dhacday degmo kamid ah Somaliland
Dad ka careysan doorashadii Golayaasha degaanka ee degmada Gibileey ayaa waxaa ay Maanta xirteen wadada xiriirisa Magalooyinka Hargeysa iyo Gibileey ee degaannada Soomaaliland.
Dadka oo isugu jira Rag iyo Haween ayaa waxaa ay taayaro ay gubeen iyo dhagxaan waaweyn ay ku xireen wadada dhex-marta bartamaha deegaanka Caro-yaambo ee duleedka Degmada Arabsiyo, iyaga oo u diidaya dadka & Gadiidka inay maraan.
Dadka banaanbaxayaasha ayaa waxaa ay ka careysan yihiin in uu doorashada kusoo bixi waayay Musharax ka sharaxnaa xisbiga UCID ee Degmada Gabiley , iyaga oo sheegay in doorashada la musuq maasuqay.
Warraka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in weli dadka careysan ay goobtaasi ku sugan yihiin, taas oo hakisay Gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isugu safri jiray Magaalada Hargeysa iyo degmada Gobileey.
Inta la ogyahay, waa diidmadii iyo rabshadihii ugu horeeyay ee ka dhasha doorashooyinka Somaliland, waxaana saacad walba si horudhac ah looogu dhawaaqayaa natiijooyinka doorashada ee degmooyinka Somaliland.